उपत्यकाका ३१ सहित देशभर २ सय ४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ! « MNTVONLINE.COM
उपत्यकाका ३१ सहित देशभर २ सय ४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि !
आइतबार उपत्यकाका ३१ सहित देशभर कोरोनाका २ सय ४६ जना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सो संख्याका संक्रमित थपिएका हुन् । यीसहित हालसम्म संक्रमितको संख्या २० हजार ३ सय ३२ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा १ सय ११ जना कोरोनाबाट निको भइ घर फर्किएका छन् । यीसहित कुल निको हुनेको संख्या १४ हजार ६ सय ३ पुगेको छ । नेपालमा कुल संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत निको भइसकेको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
त्यस्तै विगत २४ घण्टामा विभिन्न प्रयोगशालाबाट ८ हजार ६ सय ७२ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ । हालसम्म ३ लाख ९१ हजार बढीको पिसिआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म मृतक ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुलुकभर ५ हजार ६ सय ७२ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।